AnkerWork B600 oo ah kamarad shabakadeed oo loogu talagalay baahinta iyo isgaarsiinta [Dib u eegis] | Qalabka Wararka
AnkerWork B600 waa kamarad shabakadeed oo loogu talagalay baahinta iyo isgaarsiinta [Dib u eegis]
Anker wuxuu sii wadaa inuu ka shaqeeyo si uu u bixiyo noocyo badan oo beddelaad ah iyo xulashooyin qaab qalabyo ah oo loogu talagalay dhammaan noocyada isticmaaleyaasha, ha ahaato dajiyeyaasha MagSafe, aaladaha iyo dabcan, oo leh kamarado shabakadeed, mid ka mid ah laamaheeda halkaas oo ay ugu iftiimaan xulashooyinka iyo tayada ay bixiyaan, Taasi waa sababta munaasabaddan aan mar kale ku soo laabanno falaagada oo leh badeecad noocan oo kale ah.
Waxaan si qoto dheer u falanqeyneynaa AnkerWork B600 webcam, qalab loogu talagalay shaqada teleefoonka iyo qulqulka, oo leh iftiin, makarafoon iyo kuwa ku hadla. Ha seegin sababtoo ah waxay u taagan tahay beddel xiiso leh si loo horumariyo wax soo saarkaaga.
3 Rakibaadda iyo software customizable
4 isticmaalka maalinlaha ah
Kaamiradan cusub ee Anker waxay dhaxalsiisay nashqada leydi-geeska ah ee geesaha wareegsan ee aan ku aragno qalabkeedii hore. Inkasta oo ay run tahay, sida inta kale ee Anker's "unboxings", tayada ayaa laga dareemayaa xilliga ugu horreeya ee heerka dhismaha, xitaa qalabka sida fiilooyinka. Waxaan leenahay qayb dambe oo aan ka helno laba dekedood oo USB-C ah, oo lagama maarmaan u ah awoodda iyo gudbinta sawirka, iyo sidoo kale deked USB-A ah oo u adeegi doonta sidii meel xidhmo.. Dhinaceeda, hareeruhu waxay ka samaysan yihiin dhar, si ay si sax ah u soo saaraan dhawaaqa ku hadla isku dhafan.
Waxaan leenahay saldhig mobile kaas oo noo ogolaanaya in aan hagaajino webcam in ay sare ee shaashad kasta, iyo Waxaan sidoo kale ku haboon karnaa saldhigga hoose nooc kasta oo taageero ah oo loogu talagalay telefoonnada gacanta ama kamaradaha, waaTani waa ikhtiyaarka aan doortay mar haddii aanan si joogto ah ugu xidhin shaashadda.
Qaybta hore waxaa loogu talagalay iftiinka LED-ka kaas oo ku furma dhejis oo ilaaliya muraayadda. Dhinacyada waxaan ku haynaa laba badhamada taabashada makarafoonka iyo iftiinka, wax aan sidoo kale ka xakameyn karno codsiga laftiisa.
Kamaradani waxay leedahayn 2K dareenka xallinta ugu badan in kasta oo aan ku hagaajin karno hadba baahidayada, haa, oo leh awoodaha 30 sawir ilbiriqsikii, in kasta oo aanay ahayn in aan u baahannahay wax badan oo aan ku shaqeyno ama aan ku shubno. Cabbirka dareemaha waa 1 / 2.8 inji wuxuuna leeyahay nidaam soo-gaadhis oo toos ah, nidaam dheellitir cad oo toos ah, feejignaan toos ah iyo ogaanshaha qofka iyo shaqada raadraaca, wax dheeraad ah oo aan waxba ka yarayn.
Dhinaca kale waxaan leenahay afar makarafoon oo laba jiho ah oo ay weheliyaan laba ku hadla oo midkiiba yahay 2W si ay u bixiyaan dhawaaq stereo cad marka ay timaado wada sheekeysiga, dhammaan leh Auto Echo Cancelation iyo dabcan joojinta dhawaaqa wicitaanada, u oggolaanaya kaliya in codka la maqlo. Waxaan ku soo gabagabeyneynaa in AnkerWork B600 uu si fiican ugu qalabeysan yahay heer farsamo, in kasta oo aan ka hadli doono wax qabadkeeda waqtiga-dhabta ah gadaal.
Rakibaadda iyo software customizable
Nuxur ahaan, Anker AnkerWork B600 waa Bareesada & Ciyaar, tan waxaan ula jeedaa inay si sax ah u shaqeyn doonto oo kaliya iyadoo lagu xirayo dekedda USB-C ka kombuyuutarkeena. Nidaamkeeda sirdoonka macmal ah iyo awoodaha autofocus waa in ku filan maalinteena maalin kasta. Si kastaba ha ahaatee, waa muhiim in la helo software taageero ah, kiiskan waxaan ka hadlaynaa AnkerWork in aad ku soo dejisan karto bilaash, dhexdeeda waxaan ka heli doonnaa fursado badan, laakiin waxa ugu muhiimsan ayaa ah suurtagalnimada in la cusbooneysiiyo softiweerka websaydhka oo sidaas lagu sii dheereeyo taageeradeeda
In software this waxaan awood u yeelan doonnaa inaan hagaajino saddex xaglood oo daawasho oo ah 68º, 78º iyo 95º, iyo sidoo kale xulashada inta udhaxeysa seddex sifo qabasho inta udhaxeysa go'aamadii kala duwanaa maraya suurtagalnimada in la isku hagaajiyo FPS, la dhaqaajiyo lana joojiyo diiradda, ah HDR iyo a Shaqada Anti-Flicker Aad u xiiso badan marka ay na iftiiminayaan nalalka LED, waxaad ogtahay in xaaladahan flickers sida caadiga ah u muuqdaan in ay noqon karaan wax dhibsado, wax aan si gaar ah uga fogaan doono. In kasta oo ay jiraan wax kasta, waxaan lahaan doonaa seddex qaab oo aan caadi ahayn iyadoo kuxiran baahiyaheena taasoo aragti ahaan ka faa'iidaysanaysa Anker's AnkerWork B600.
Waxaan kugula talineynaa haddii aad go'aansato kamaraddan waxaa laga heli karaa bogga Anker iyo Amazon, inaad ku degdegto inaad rakibto Anker Work oo aad fursad u hesho inaad cusboonaysiiso firmware-ka kamaradda.
isticmaalka maalinlaha ah
Kamaradani waxay ku guulaysatay laba abaalmarin CES 2022 waana si sax ah sababtoo ah waxaan wajahaynaa "Dhammaan-in-One", qalab awood u leh inuu yareeyo tirada "clunkers" ee aan ku hayno miiskayaga mahadsanid inaan isu keeno dhammaantood hal kali ah. Intaa waxaa dheer, waxay si sax ah uga shaqeysaa dhammaan dhinacyada, habkan. Waxay noqotay kamaradayada caadiga ah ee toddobaadlaha ah ee iPhone News Podcast halkaas oo aan ku wadaagno macluumaadka ku saabsan dhacdooyinka hadda jira ee tignoolajiyada guud ahaan.
Halkani waa halka ay ku muujisay kartideeda, gaar ahaan iyada oo ay ugu wacan tahay nidaamka nalalka LED-ka ee aan awood u yeelan doono in aan ku qalin-jabinno inta u dhaxaysa qabow iyo qabow, maadaama kan aan soo sheegnay uu yahay midka kaliya ee la isticmaalo.
Kamaradu waxay leedahay VoiceRadar Haddii ay dhacdo in aan go'aansanno in aan isticmaalno makarafoonadeeda, tani maahan wax ka badan nidaamka joojinta dhawaaqa dibadda kaas oo caddaynaya waxqabadka wicitaanka iyo in imtixaannadayada lagu muujiyay in ay aad waxtar u leeyihiin ciribtirka dhawaaqa asalka ah iyo diiradda saaraya kaliya kuwa is-dhexgalka. .
Intaa waxaa dheer, kamaradu waxay leedahay nidaamka jir kaliya, taas oo aan ahayn wax kale oo aan ahayn dabagal gaar ah oo qofka, oo had iyo jeer lagu hayo xagga hore. Tijaabooyinkeena, waxaa lagu muujiyay inay aad waxtar u leedahay labadaba heerka diiradda iyo la socodka laftiisa, wax aan ku ogaanay horumarinta hawlaha.
waxaad ku samayn kartaa AnkerWork B600 oo ka bilaabmaya 229 euro websaydka Anker, ama si toos ah Amazon, inkastoo aad sidoo kale ka heli doontaa in qaar ka mid ah meelaha caadiga ah ee iibka.
Sidan, waxa loo dhigayaa mid ka mid ah kamaradaha All-in-One ee ugu dhammaystiran uguna badan ee suuqa iyo Actualidad Gadget ma samayn karno wax aan ahayn ku talin.
Ku dhejiyay: May 1 ee 2022
Wax ka badalidii ugu dambeysay: May 1 ee 2022
Kala duwanaansho iyo astaamo
Waa in lagu daraa laad
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » AnkerWork B600 waa kamarad shabakadeed oo loogu talagalay baahinta iyo isgaarsiinta [Dib u eegis]
Ku raadinta PDF